Otú Ị Ga-esi Na-eme Ka Ndụ Gị Na-aga Otú Ị Chọrọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
O nweghị onye ụwa zuuru. Ihe na-eme ka ndụ na-atọ ụtọ abụghị ihe ole mmadụ nwere, kama ọ bụ mmadụ itinyere ụwa ya obiọma. Ihe na-enyerekarị mmadụ aka ka nsogbu ndị o nwere ghara ịnyịgbu ya bụ iwere ụwa ya otú o si hụ ya ma gbalịa hụ na ọ na-eme otú ike kwere ya. Ọ bụrụ na ọnọdụ gị agbanwetụ n’agbanyeghị ụdị nsogbu gị na ya na-alụ, ọ dị mma. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụ n’ọdịnihu ka ihe ga-akacha adị mma.
Chineke kwere anyị nkwa na oge na-abịa mgbe ndụ ụmụ mmadụ ga na-atọ ha ụtọ n’ihi otú ihe ga-esi na-aga nke ọma. Ha ga-enwe ike ịdị ndụ ebighị ebi n’enweghị nsogbu ọ bụla, ha agaghịkwa na-adọlị ndọlị. Obi agaghịkwa na-ajọ ha njọ. (Aịzaya 65:21, 22) Baịbụl kwuru na ọ bụ ụdị ndụ a bụ “ndụ n’ezie.”—1 Timoti 6:19.
“Ha ga-ewu ụlọ, biri n’ime ha; ha ga-akọkwa ubi vaịn, rie mkpụrụ ha. Ha agaghị ewu ụlọ, onye ọzọ ebichie ya; ha agaghị akụ mkpụrụ, onye ọzọ erie ya. N’ihi na dị ka osisi si anọ ogologo ndụ, otú ahụ ka ndị m ga-anọ ogologo ndụ; ndị m họọrọ ga-eji ihe aka ha rụpụtara mee ihe n’uju.”—Aịzaya 65:21, 22.